HIM | Health in Myanmar » 2012 » May
အမေးအဖြေ (၄၅) (၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ)
Author: HimBur | Category: ၁၈နှစ်ပြည့်မှဖတ်ပါ။, Myanmarno comments | Tags: ကျန်းမာရေး အသိ, အမျိုးသမီး, အမျိုးသား, ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ခွဲစိတ်တာက အနာပေါက်သလို အမာရွတ်ကျန်တယ်။ ပုံမှန် ပိုးမဝင်၊ သွေးမယိုရင်လဲ အမာရွတ်ကျန်နေမယ်။ ကြာလေ ကောင်းလေဖြစ်လာမယ်။ ပိုးဝင်ခဲ့ရင်၊ သွေးယို ခဲ့ရင် ပျောက်တာ ပိုကြာမယ်။ အကြည့်ရ ပိုဆိုးနေနိုင်တယ်။
Author: HimBur | Category: Myanmar, Newsno comments | Tags: ကျန်းမာရေး အသိ, ပညာပေး, အမျိုးသား
ကျန်းမာသန်စွမ်းသော သုက်ပိုးထွက်ရှိမှု အတွက် အဓိက ကျသည့် မျိုးဗီဇကို စကော့ တလန်မှ ပညာရှင်များက လေ့လာ တွေ့ရှိခဲ့ ပြီးနောက် အမျိုးသားများ သောက် သုံးနိုင် သည့် ပဋိသန္ဓေ တားဆေး ထုတ်လုပ်နိုင်ရန် မျှော်လင့် လာနိုင်ပြီ ဖြစ်သည်။
Two videos on the response to HIV in Kachin state
Here are two videos on the response to HIV in Kachin state Acting does not come easily to the people in the film. But the honesty is refreshing.
ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများပါ အေ့ဒ်စ်ဝေဒနာသည်အား ခွဲခြားဆက်ဆံဆဲ
Author: HimBur | Category: Myanmar, Newsno comments | Tags: HIV, PLH, အခွင့်အရေး
HIV ဝေဒနာရှင်များအား ခွဲခြား ဆက်ဆံမှု ပြုလုပ်သူများတွင် သာမန်ပြည်သူများ သာမက ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများပါ ပါဝင်လျက်ရှိကြောင်း ကရုဏာလရိပ်ဖောင်ဒေး ရှင်းမှ ဒေါက် တာပြုံးမိုအိက ပြောသည်။
Job with the TSF
HIV Positive ဖြစ်နေသော ကစားသမားကို ကစားခွင့် ပြုသင့်သလား
Author: HimBur | Category: Myanmar, Newsno comments | Tags: HIV, အခွင့်အရေး, အမျိုးသား
ကိုမိုလ်သည် ဟော်လန် ဘောလုံး လောက၏ ပထမဆုံး HIV ပိုး ရှိသော ကစားသမား ဖြစ်လာပြီး ၎င်းကိစ္စမှာ တုန်လှုပ်ဖွယ် ပြဿနာကြီး ဖြစ်လာခဲ့သည်။
Author: HimBur | Category: ၁၈နှစ်ပြည့်မှဖတ်ပါ။, Myanmar2 comments | Tags: ကျန်းမာရေး အသိ, အမျိုးသမီး, ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
Endometriosis ကို သားအိမ်ရောဂါလို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ရပေမဲ့ သားအိမ်မဟုတ်တဲ့ နေရာတွေမှာ ဖြစ်နေ တာပါ။ ဒီရောဂါဟာ နာတာရှည်ဖြစ်တယ်။
တင်ပါးဆုံတွင် အင်္ဂါတွေရောင်တယ်ဆိုတာ နာတာရှည် အမျိုးအစားဖြစ်တယ်။ ခုဖြစ် ခုခံစားရတာ မဟုတ်ပါ။ များသောအားဖြင့် လိင်ကတဆင့် ကူးစက်တာ ဖြစ်တယ်။
အမေးအဖြေ (၄၄) (၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ)
အိမ်ထောင်ကျပြီး ရာသီမှန်ပါသလား။ တားနည်း-တားဆေး သုံးသလား။ အဖြူဆင်းသလား။ နာတယ်ဆိုတာ ကိုယ်တိုင် ခံစားရတာလား၊ အဲဒီနေရာကို ဖိကြည့်မှ နာတာလား။ နှစ်မျိုးလုံးလား။
TB အသစ်လား၊ အဟောင်းလား
Author: HimBur | Category: Myanmar, Newsno comments | Tags: TB, ဆေးဝါး
Active TB လောလောလတ်လတ် (တီဘီ) ရှိနေတဲ့သူရဲ့ ဓါတ်မှန်ဆိုတာ –
1. Infiltrate or Consolidation အဆုပ်ထဲက Airspaces လေနေရာမှာ Opacification ပိတ်နေမယ်၊ ထူထဲနိုင်တယ်။
အမေးအဖြေ (၄၃) (၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ)
Author: HimBur | Category: ၁၈နှစ်ပြည့်မှဖတ်ပါ။, Myanmar1 comment | Tags: ကလေး, ကျန်းမာရေး အသိ, အမျိုးသမီး, အမျိုးသား
အရင် ၂ ရက်လောက်က လိင်ဆက်ဆံမိတာမှာ အစွပ်မစွပ်မိလိုက်လို့ အခု လိင်တံ ပြည်ထွက် (ဂနို) ဖြစ်နေ ပါတယ်။ အဲဒါ ဘာဆေး သောက်ရမလဲ။